बामदेवको अर्थमन्त्रीमा दाबी, प्रधामन्त्री ओली अन्य मन्त्रालयमा लाने पक्षमा – " सुलभ खबर "
बामदेवको अर्थमन्त्रीमा दाबी, प्रधामन्त्री ओली अन्य मन्त्रालयमा लाने पक्षमा
काठमाडौं, २३ भाद्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा सरकारबाट मनोनित हुने सदस्यका रुपमा जाने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । उनलाई मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि तयार भइसकेका छन् । उनको नाम यसै हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मनोनयनका लागि सिफारिश हुने बुझिएको छ । गौतमको नागरिकताको प्रतिलिपि बालुवाटारमा पुगिसकेको छ ।
गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुनका लागि मात्र नभई सरकारमा जानका लागि रणनीतिक तरिकाले राजनीतिक कदम चालिरहेका छन् । उनको दाबी अर्थमन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री रहेको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा प्रष्टसँग आफ्नो चाहना राखिसकेका छन् । उनले अर्थमन्त्री बनेर उत्कृष्ट काम गरेर देखाउन समेत भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हुन्छ या हुन्न भनेका छैनन् ।
ओली गौतमलाई अर्थबाहेकको अन्य मन्त्रालयमा लाने पक्षमा छन् । उनले अर्थमन्त्रालय आफैले राखेर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत् चलाउनेबारे समेत छलफल गरेको बुझिएको छ । तर, अर्थमन्त्रीमा गौतमको दाबीले उनी अप्ठ्यारोमा छन् । गौतमलाई चिढ्याउन नहुनेमा ओली स्पष्ट छन् ।
गौतमले अर्थमन्त्री बनेर पुरक बजेट ल्याउने सम्मको रणनीति बनाएका छन् । उनले नेकपाको घोषणापत्र अनुसारको बजेटको तयारी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमार्फत् लोकप्रीयता कमाउने र पार्टीमा पकड बढाउने सम्म उनको सोच देखिन्छ । तर, उनको यो रणनीति बुझेर रोक्न खोज्नेहरु सक्रिय भइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री नपाए गौतमले के गर्लान् ? यो प्रश्न उठेको छ । उनले गृह मन्त्रालय पाएमा सन्तुष्ट हुने सम्भावना पनि छ । त्यसका लागि रामबहादुर थापा बादललाई हटाउने या अन्य मन्त्रालयमा पठाउन सक्नुपर्छ । जुन कठिन हुनसक्छ ।
विगतमा दुईपटक गृहमन्त्री भइसकेका गौतमले फेरि गृह मन्त्रालय पाउने सम्भावना पनि छ । तर, उनको चाहना विकासे मन्त्रालय नै रहेको देखिन्छ ।अर्थमन्त्रीमा नेकपाभित्रबाट विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको पनि दाबी छ । अन्य दाबेदार पनि रहेकाले गौतमका सामु चुनौती हुनसक्छ ।